Tag Archive for "आन्तरिक राजश्व कार्यालय" - तीन अर्ब ८४ करोड राजश्व सङ्कलन
तनहुँ । आन्तरिक राजश्व कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वैशाखसम्म रु तीन अर्ब ८४ करोड ८३ लाख राजश्व सङ्कलन गरेको छ । वैशाख मसान्तसम्म रु तीन अर्ब ६६ करोड ८८ लाख सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहे पनि उक्त कार्यालय लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन गर्न सफल भएको हो । कार्यालयका सूचना अधिकारी मोहनरमण त्रिपाठीले लक्ष्यभन्दा रु १७ करोड ९५ लाख बढी राजश्व सङ्कलन भएको जानकारी दिँदै वैशाख महीनामा मात्रै रु ६६ क... थप पढ्नुहोस्
विराटनगर । विराटनगरस्थित आन्तरिक राजश्व कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको छ महीनाको अवधिमा कूल रु.तीन अर्ब १८ करोड १३ लाख ३१ हजार राजश्व सङ्कलन गरेको छ । सो अवधिमा गत वर्ष रु. दुई अर्ब ४६ करोड ५३ लाख ९० हजार राजश्व सङ्कलन गरिएको थियो । तुलनात्मक रुपमा यस वर्ष सो अवधिमा रु ७१ करोड ५९ लाख ४१ हजार राजश्व बढी सङ्कलन भएको कार्यालय प्रमुख दिलीपकुमार गौतमले बताए । कार्यालयका अनुसार रु. तीन अर्ब चार करोड ६४ ... थप पढ्नुहोस्
कञ्चनपुरमा ४ महीनामै ६८ करोड राजश्व सङ्कलन
कञ्चनपुर । चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को पहिलो चौमासिकमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयले लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को पहिलो चौमासिकको कात्तिक मसान्तसम्ममा १३२ दशमलव १६ प्रतिशत बढी राजश्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको हो । उक्त कार्यालयका कर अधिकृत टेकराज थापाले पहिलो चौमासिकमा रु ५२ करोड १९ लाख १७ हजार सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा रु ६८ करोड ९७ लाख ४७ हजार राजश्व स... थप पढ्नुहोस्